Capsule makorari muchina vatengesi uye fekitori - China Capsule makorari muchina vagadziri
Otomatiki Capsule Makorari uye Kuramba Muchina, Capsule Rejector
Capsule Polishing Uye Sorting MachineProduct mufananidzo Kushanda: Muchina uyu inyowani nyanzvi yezvigadzirwa zvemishonga. Pasi pekutyaira kweinoramba ichishanduka mota, inogona kupukuta nekuchenesa guruva rakanamirwa pamubhadharo uye piritsi rekuvandudza pamusoro pemishonga kupora. Main technical data: kugona 150000 Pcs / hr Simba rekushandisa 220V, 50Hz, 2A, Chikamu chimwe chete Net huremu 60kg Net huremu 40Kg Negative 2.7m3 / mn -0.014mpa Yakadzvanywa mweya 0.25m3 / mn 0.3mpa chimiro (LxWxH) 800 ...
Yekumhanyisa Capsule Polisher, Capsule Polishing Machine
Capsule Kukwenya Uye Kurongedza Muchina, Capsule PolisherProduct mufananidzo Chikumbiro: Muchina uyu inyanzvi yehunyanzvi michina yehemesi. Pasi pekutyaira kweinoramba ichishanduka mota, inogona kupukuta nekuchenesa guruva rakanamirwa pamubhadharo uye piritsi rekuvandudza pamusoro pemishonga kupora. Main technical data: kugona 150000 Pcs / hr Simba rekushandisa 220V, 50Hz, 2A, Chikamu chimwe chete Net huremu 60kg Net huremu 40Kg Negative 2.7m3 / mn -0.014mpa Yakadzvanywa mweya 0.25m3 / mn 0.3mpa ...
Yekumhanyisa Capsule Polisher uye Sorter neMutengo Wakaderera Mutengo Wakanaka
Vibrating Hwendefa Sieving Kamudzira makorari Machine
Capsule Makorari Uye Sorting Machine Chigadzirwa mufananidzo Chikumbiro: Mushini iyi inoverengeka nyanzvi yezvigadzirwa zvemishonga. Pasi pekutyaira kweinoramba ichishanduka mota, inogona kupukuta nekuchenesa guruva rakanamirwa pamubhadharo uye piritsi rekuvandudza pamusoro pemishonga kupora. Main tekinoroji dhata: Unyanzvi 7000 zviyo / min Simba Kupa 220V, 280W Makimo 1150 × 400 × 1000 mm (Kwose) 1300 × 540 × 1040 mm (Kurongedza) W ...
Otomatiki Capsule Makorari & Kuronga Muchina
Capsule Makorari Uye Sorting Machine Chigadzirwa mufananidzo Chikumbiro: Mushini iyi inoverengeka nyanzvi yezvigadzirwa zvemishonga. Pasi pekutyaira kweinoramba ichishanduka mota, inogona kupukuta nekuchenesa guruva rakanamirwa pamubhadharo uye piritsi rekuvandudza pamusoro pemishonga kupora. Main technical data: kugona 150000 Pcs / hr Simba rekushandisa 220V, 50Hz, 2A, Chikamu chimwe chete Net huremu 60kg Net huremu 40Kg Negative 2.7m3 / mn -0.014mpa Compre ...